Martin Vrijland kacha ọhụrụ Posts
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 4 April 2020	• 28 Comments
Enwere obere ihe kpatara ị ga - eji kwuo na nje n'ofe enweghị ike ibunye ya yana na ihe kpatara fim dị ka nke dị n'okpuru ala nke isiokwu a na - eduzi fim na - agbasa ozi ọma. Nke a bụ n'ihi na nje enweghi ike ịmị ma ọ bụ ịkwaga naanị ya; Ọzọkwa coronavirus bụghị ọ bụla bacteria, [...]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 1 April 2020	• 51 Comments
N'agbanyeghị oke egwu dị na ọha mmadụ yana nnukwu mmụba a na-agbasa ebe niile, nke mere na ndị mmadụ agaghịzi ahụ oke ọhịa site na osisi ma na-agbaghaghachi azụ azụ iji “ndị ọkachamara” nke usoro mgbasa ozi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọ ga-amasị m ịkpọ gị. mee mgbanwe ziri ezi. Mgbalị ahụ yiri […]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 1 April 2020	• 23 Comments
Tom Barnett kwuru na ya bụ dọkịta zuru oke. Ọ gụrụ sayensị nke biomedical tupu ya abanye na nkuzi nke ọgwụ eke, nri, ahụike, ahụike dị elu na akparamaagwa. Ọ na-atụ uche ihe ka ọtụtụ n'ime afọ XNUMX na XNUMX ya n'ihi ọgwụ mgbochi yana mbibi amalgam ma nwee mmasi banyere ikike anyị nwere n'ime anụ ahụ dị mma [...]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 31 March 2020	• 18 Comments
N'oge a ọtụtụ ajụjụ na-awụfu dị ka: “Olee mgbe ị na-atụ anya ka ụlọ ahịa na ebe nri ga-emeghe ma ị ga-aga ezumike ọzọ? Achọrọ m nke a n'ihi na di m nọ n'ụlọ ọrụ na-ele ọbịa. ” ma ọ bụ “Olee ihe ị chere banyere ahịa ụlọ? Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịre ụlọ m? ", Mana kwa […]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 31 March 2020	• 26 Comments
Akọwaara m nke ọma na ọ dị ka Q Anon bụ ụgbụ nchekwa maka ndị na-ahụ na enwere ihe na-aga n’ihu na nje corona (lee ebe a na ebe a). Okwu a 'Q' yiri nke yiri mkpụmkpụ maka kwụ n'ahịrị ma ọ bụ n'ahịrị ma ọ bụ nnọkọ; ị ga-[…]
Germany na-arụ ọrụ na ngwa coronavirus na-eme ka a mata onye ị bịara ịkpọtụrụ
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 30 March 2020	• 4 Comments
"Germany chọrọ ịzụlite ngwa na obere oge na-eme ka a mata onye nwere ama na-akpọtụrụ, ka Reuters na-akọ. Mba a si otú a na-agbaso nzọụkwụ nke Singapore. Ngwa ndị Singapore na-edebanye aha na Bluetooth mgbe ama dị nso na ekwentị ọzọ. Kwesịrị onye nwe smartphone nwere coronavirus […]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 30 March 2020	• 14 Comments
Mmelite Coronavirus: Cheta mgbe m kwuru na ọ gafeeghị Eprel 6 (lee ebe a dịka ọmụmaatụ). Dịka e buru n’amụma, ndọtị nke usoro ndị a ka ekwuputara taa. Ọ dị nfe hụ ọhụụ na ịkọ maka na anyị na-agba akwụkwọ edemede ukwu. Ozugbo ị ghọtara na edemede edemede, ị nwekwara ike […]
Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, omimi miri emi na mechiri ịntanetị na Eprel 1?
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 28 March 2020	• 26 Comments
Ọ dị mkpa ịtụle Q Anon ọzọ, n'ihi na ọtụtụ ndị yiri ka ha kwenyere n'ihe faịlụ Q Anon na-ekwu. Ha kwenyere na steeti dị omimi nke Trump ga-ewepụ. Nkwupụta m bụ: Enwere nnukwu omimi miri emi nke gụnyere Trump na Q Anon. Egwuregwu ahụ nke […]
Nwoke ndi nwoke bu nwoke ndi nwoke? Ihe ndabere sayensi
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 26 March 2020	• 17 Comments
Otu edemede nke NRC taa mere ka o doo anya na ọkachasị ụmụ nwoke na ndị agadi na-anwụ site na coronavirus. Ntughari site na edemede ahụ: Nsogbu kachasị na Covid-19 bụ ihe a na-akpọ cytokine mmiri, nke nwere ike ime mgbe ọnya nje malitere ịkpa ike. Ọ bụ mmeghachi ike siri ike nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ megide nnukwu nje, […]
Onye isi obodo threattali na-eyi egwu iziga ọkụ na-ere ọkụ iji buso coronavirus ọgụ
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 26 March 2020	• 14 Comments
Kedu ihu ihu ala nke na-agbasa site na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mgbasa ozi na njikọta nke mmegide a na-achịkwa? Rịba ama akara egwurugwu. Egwurugwu ahụ ọ̀ bụ ihe nnọchianya nke ụwa ọhụrụ ahụ n'usoro? Iju mmiri gbara ụwa dị ka ụbọchị Noa? Ihe pụtara ọzọ […]
Nleta nile: 1.409.278
Riffian op Coronavirus covid-19 na sayensị: Kedu ka ọ si abanye n'ahụ gị ma olee otu ị si ebufe ya?